Sacuudiga: Ramadan waxa uu bilaabanayaa Isniinta | Somaliska
Sacuudiga: Ramadan waxa uu bilaabanayaa Isniinta
Sacuudiga ayaa sheegay in maalinta isniinta ay tahay bilowga bisha Ramadaan sida ay sheegtay Al-Arabiya.
Sacuudiga, Masar, Qatar, UAE, Kuwait iyo inta badan wadamada carabta ayaa xaqiijiyay in Ramadan uu bilaabanayo 1-da Augusti Isniinta haddii ale idmo.
Meel laga arkay bisha Ramadan lama sheegin.
July 30, 2011 at 20:08
Waa mahadsan tahay jimcaale waan kaa sugeynaa xaqiijin bisha soon iinsha allaah kuna dadaal in la soo xaqiijiyo aragtida bisha walaal sababtoo ah Ilaaheey wuxuu yiri aragti ku sooma kuna afura
July 31, 2011 at 01:52
Wad mahadsantihin dhammaan bahda somaliska.com waana idinka sugeynay inaad noo soosheegtaan bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana idin leenahay ajar iyo xasanaad Alla ha idinka siiyo;
a.s aqyaarta dhamaan , tan kale Deeqo waxan filayaa aragti looma baahno waayo bisha shacbaan waa 30 manta oo axad ah sida la ogyahayna bilaha hijriyada 29 ama 30 ayey ku dhamaan marka kor iyo hoos berri insha Alaah waa soon
July 31, 2011 at 11:58
Su,aal anaga sacuudi maa nalaka xakumaa xaa noogu juro sa,udi xiliga laga soomaa
Nabiga Scw waxaw dhahay arigti kusoom aragtina kufur hadaad arki weysiin ee cad idinka daboolo dhameestira soondheere. tan kale waxa laga arkaa buurti marka kutiil iyo shalaambood iwm wax soo sheego lama weeynaayo inkastoo wadankaan joogno ay adagtahay in la,arko 1–ga ,2 soon wnaaagsan kuligiiiiiin
Weeeee, what a quick and easy souoltin.